Booliska Berlin oo qabsaday guriyo ay leeyihiin qoysas Libnaani ah - BBC News Somali
Image caption Lacagta dahabka ka sameeysan ee laga xaday dalka Canada 2010-ka
Booliska Berlin ayaa qabtay qoysas lebnaani ah oo loga shakiyey 77 sheey oo ay Barliin baadi goobeyso in burcadnima abaabulan lagu dhacay lacagta dahabka oo sida shilinka ka sameeysan fal dambiyeedya kalana ay geysteen.
Mid ka mid ah qoysaskaasi Libnaan ayaa looga shaki qabaa iney xadeen lacagta dahabka oo sida shilinka ka sameeysan. Bisha march 2017, shirkadda 'Big Map Leaf' ee laga leeyahay dalka Canada waxaa laga xaday dahab miisaankiisu gaarayo 100kiilo (200lb) oo dahab nadiif ah cabbirkiisuna yahay 24 kaarat (cabbirka tayada dahabka).
Warbaahinta dalkaasi Jarmalka ayaa waxay sheegeen inaan lacagta dahabka aan weli la helin. Lacagta dahabka oo qiimaheeda lagu qayaaso 3.7 milyan oo yuuro.
Waxaana aad looga cabsi qabaa in dahabka la dhacay dibna loo sii iibiyey.
Damabi baadhayaasha qayba ka mid ah alaabada la dhacay soo qabtay ayaa waxay sheegeen in badankood ay yihiin mid lagu soo dhacay fal burcadnimo oo abaabulan. Iyada oo la eegayo arrima sharci dartood lama sheegin magacda dadkaasi Libnaaniga ah, waxaana lagu soo gaabsaday magacooda 'R'.
Sanadki hore ayaa dalka Jarmalka lagu ansixiyey sharci mamnuucaya lacagaha waddamada si sharci darra ah la isaga gudbiyo iyada oo looga gol leeyahay faa'ido in laga raadsado.
Qoysaska ka soo jeeda Libnaan ee ay boolisku gacanta ku hayaan ayaa waxaa looga shaki qabaa iney ku lug leeyihiin dambiya ay ka mid yihiin dil, handadaad, ka ganacsiga daroogada iyo tahriibinta dadka.